Tokony hafana fo eo amin’ ny asantsika isika
"Izaho [dia] lehilahy (...) nazoto indrindra ho an' Andriamanitra tahaka anareo rehetra ankehitriny." - Asa. 22:3.
Amin'ny maha vahoaka antsika dia tsy ory talenta isika. Eo anivontsika dia misy lehilahy sy vehivavy izay hankasitrahan'Andriamanitra, asa raha atolotr'izy ireo ho Azy izany, kanefa vitsy dia vitsy ireo izay manana ny toe-tsain'ny fahafoizan-tena. Misy ireo izay vonon-kizara izay ananany, ary mihevitra fa rehefa manao izany izy dia tsy misy na inona na inona takina amin'izy ireo intsony. Tsy manao fahafoizana manokana izy ireo amin'ny fanaovana izany. Tsara ny fanomezam-bola, raha toa ka ampiarahina amin'ny ezaka ataon'ny tena manokana, raha tsy izany dia tsy ho lasa lavitra izany eo amin'ny fitaomana ny hafa handray ao am-pony ny fahamarinana. Tsy hoe miantso anao hanome ny volanao ihany Andriamanitra (...) fa ianao mihitsy no antsoiny. Tsy mety raha atolotrao ny fanananao kanefa tsy atolotrao ny tenanao noho ny fitiavan-tena. Ny mpiasa iray mirotsaka an-tsehatra eo amin'ny saha dia sarobidy lavitra noho ny vola an-tapitrisany kanefa tsy misy olona hanao ny asa. Ny fanoloranao ny tenanao dia fanatitra izay hanana ny akony eo amin'ny asa ary mifanaraka amin'ny zava-takin'ny asa.
Maro ireo izay tsy vonona hanao ny adidy izay tokony ho vitany raha manapa-kevitra izy, ary tsy ataon' izy ireo izany satria tsy ananany ny toe-tsain'ny fahafoizan-tena. Hadinin'Andriamanitra amin'izy ireo ny fanahin'ireo mpiara-belona aminy. Afaka nanatanteraka asa tsara tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasa tamin'i Kristy izy ireo, ary hampamoahina ny amin'ny asa tsara tokony ho nataon'izy ireo ho an'ny fanahin'ny hafa saingy tsy nataony (...)
Tsy ho ela dia ho tonga ny alina, ary tsy afaka miasa ny olona amin'izany. Mafana fo sy miezaka mafy i Satana eo amin'ny asany. Raha tsy tratrany amin'ny voalohany ny tanjony dia miezaka manandrana indray izy. Hanandrana paikady hafa izy, ary amin'ny faharetana be no hiasany mba hampiharany fakam-panahy isan-karazany hamandrihana ny fanahy. Tsy mba kivy velively izy, noho izany dia tsy avelany amin'izao ny fanahin'ny olona. Raha mitovy amin'ny an'i Satana izay miezaka mamitaka ny fanahy mba ho very mandrakizay ny faharetana sy ny hafanam-pon'ireo mpanara-dia an'i Kristy eo amin'ny asa famonjem-panahy, dia ho olona an'arivony no handray ny fahamarinana eo amin'izay tsy ahitana afa-tsy iray ankehitriny. - GCB, 1 Oktôbra 1899.